फागुन २२ गते शनिबारको राशिफल, तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस् – Samabeshi Khabar
फागुन २२ गते शनिबारको राशिफल, तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस्
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०७:१४ by Samabeshi Khabar
काम बिग्रने डरले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ । अरूका काममा धेरै समय खर्चनुपर्ला। विगतका समस्या बल्झिन सक्छन्। सानातिना काम र घरेलु समस्यामा अल्झनुपर्ला। बुद्धिको उपयोगले मात्र समस्या सुल्झाउन सफल भइनेछ। अरूको भर पर्दा काम अधुरो रहन सक्छ। फजुल खर्च बढ्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुग्ने देखिन्छ।
घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय रहेकोे छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ। भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। आफन्तसँग सुमधुर सम्बन्धका लागि विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। समस्या पर्दा शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नेछ।
दिगो योजनाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् । कृषि तथा पशुधनले मनग्गे फाइदा दिनेछ। पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्य प्राप्तिको योग रहेको छ । दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम बनाउन सकिनेछ।
सामान्य कामलाई पनि निकै मिहिनेत पर्नेछ। अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। आँटेको काम स्थगित हुनाले मन खिन्न हुनेछ। तापनि, मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ।
सहयोगीहरूले राम्रो फाइदा दिलाउनेछन्। भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ। काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ। टाढिएका मित्रगण नजिकिनाले प्रसन्नता मिल्नेछ। सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। अभाव हट्नुका साथै दाम, नाम र इनाम प्राप्त हुनेछ।